Ukuphupha u-Justa Discover ➡ Discover Online ▷ ➡️
I-fair, ebizwa ngokuba yi-fair, fair, cathedral, okanye nje umthendeleko womntu, isiganeko esinemibala enemibala, edlalwa rhoqo kwindawo efanelekileyo. Kwiindawo ezininzi iseyeyona nto ibalulekileyo enyakeni. Abantu abaninzi badibana apho ukuze bonwabe kwaye balibale ngobomi bemihla ngemihla.
Kukho iivenkile ezithengisa isendwitshi emnandi, iilekese zomqhaphu, ipapa kunye neziselo ezinje ngebhiya, umculo ngamanye amaxesha ovela kwinto yokuguba kwamalungu amadala, kunye nemidlalo yamathuba, iicarousels, iroller coaster kunye neebhaluni. Ii-Stilts zihlala zifumaneka kwimiboniso. Iindwendwe eziya kwimarike zithatyathwa lilizwe elinemibala kwaye phantse liphantse lishiye ukubonwa okungapheliyo. Kodwa unokuntywilisela kwezi ziganeko ngelixa ulele.
Umfanekiso wephupha "elilungileyo" kunye nezinto zalo ezininzi ezinomtsalane, ezinjengevili likaFerris kunye nomoya okhethekileyo, ubonakala rhoqo kuphando lwamaphupha. Nangona kunjalo, ukutolikwa kwephupha kunokuvela ngokwahlukileyo ukuba awunikeli ngqalelo kwiinkcukacha ezibalulekileyo zephupha elo.
1 Isimboli yephupha «enobulungisa» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Umqondiso wephupha «elifanelekileyo» - ukutolikwa kwengqondo
3 Umqondiso wephupha "elilungileyo" - ukutolikwa kokomoya
Isimboli yephupha «enobulungisa» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukuba iphupha liyabhadula xa ulele ubumnandi, oku kudla ngokutolikwa njengomqondiso wokuba awuqondi ubomi bakho ngokuchanekileyo el mundo ukuvuka kunye nokubaleka kwinyani. Ukuphupha kufuneka kutshintshe ngokungxamisekileyo kwaye kujongane nobomi bokwenyani. Ukubalekela kwakho kobu bugcisa Ihlabathi elikhohlakeleyo mayime.
Utyelelo kumboniso olungileyo ephupheni unokuba ngumqondiso wokuza Imibhiyozo ukuba. Iya kuba yiminyhadala eyonwabisayo, kodwa iya kubiza imali eninzi. Ukuqhakamshelana nabantu abaninzi abanokuba luncedo ekuphupheni kulungile.
Kwangokunjalo, umzekelo, ukuthenga isonka sejinja kwindlu efanelekileyo kutolikwa ngokuthi: amakhekhe amnandi kwaye ahonjiswe ngokutyebileyo abonisa ukuba ukuphupha kungazanelisa ngcono iimfuno zakho ezisisiseko kwixesha elizayo. Usenokungasokoli njengemali oqheleyo.
Ngokubanzi, nangona kunjalo, ukulunga ekutolikeni amaphupha kunokuba ngumqondiso we Ukuchitha imali Yiba, kodwa nangenxa yentlungu kunye nokukhathazeka okuvela emva kotyelelo olubonakala ngathi luyonwabisa kwaye luyonwabisa.
Umqondiso wephupha «elifanelekileyo» - ukutolikwa kwengqondo
Ukuxokozela kunye nokuqaqamba kwemibala yephupha liyaziwa ngokubanzi kutoliko lwephupha njenge into evanithi ngokuthambile itolikwe. Lo mfanekiso unjengephupha umele ukungaqiniseki kobomi kunye noluntu olungathandekiyo. Ukuba iphupha lilodwa kutyelelo lwakho kumdlalo wehlabathi lephupha, uhlala uziva ulilolo kwaye ungathandwa uphathwa ebomini bokuvuka.
Ubuhle emaphupheni isenokuba sisicelo esivela kwi-subconscious yokuba amaphupha kwihlabathi elivukayo akufuneki abuthathe ngokungathandekiyo ubomi. Ke uhlala engenazo izinto eziyimfuneko ukwenza lulaukonwabela ubomi kube kanye kwaye ububone njengobulungileyo. Kuya kufuneka uzonwabise ngokwenza into kwaye wonwabe ebomini.
Kodwa kusenokubakho umqolomba kumfanekiso wephupha "elilungileyo". Ukutolikwa kwamaphupha kukwabona njengophawu lwento engekhoyo. Ukuchitha imali. Kule meko, ukuphupha kuchitha imali eninzi ngokungakhathali kunye nolonwabo lwexesha elifutshane.
Umqondiso wephupha "elilungileyo" - ukutolikwa kokomoya
Ukutolikwa kwamaphupha okomoya, ubulungisa bumele i ukwenza lula ebomini.